ပန်ဒိုရာ: ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဖော်ပုံ အချို့
touchpad နဲ့ ဆွဲတာမို့ကို ပို နက်နဲ လှပ နေတော့တယ်။း)
အဲလိုမှန်းသိ.. သရုပ်ဖော်ပုံ တပုံ အပ်ပါတယ်..း)
သရုပ်ဖော်ပုံနဲ့ ပါတ်သက်လို့ တော့ ပထမဆုံး
ပန်းချီဆရာ ဆိုတာတော့ ကျနော်လဲ မဖြစ်ချင်ဘူး။
ပန်းချီကို ချစ်မြတ်နိုးစွာ ရေးဆွဲသူဘဲ ဖြစ်ချင်တာ..။
ကျနော်လဲ အဲဒီ wacom table လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျ..။
ပုံတပုံကို ရေးဆွဲနေတုန်းဗီဒီယို ၇ိုက်ပြီးတင်တာနဲ့ စာရင် အဲဒါလေးတွေနဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ photoshop သုံးပြီး ရေးဆွဲတင်ပြတာက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးဖြစ်မယ် ထင်လို့ ..။
ကျနော်က တော့ ပန်းချီဆရာမဖြစ်ချင်ဘူး..
ပန်းချီပညာကို မြတ်နိုးစွာ ရေးဆွဲသူဘဲ ဖြစ်ချင်တယ်..
ပုံတွေ အမြဲ ဆက်ဆွဲနော်..။
ခင်ဗျားပုံတွေက ဆီဆေး ရေဆေးကားကြီးလိုရေးသင့်နေပြီဗျ..
ခံစားတတ်မှာမဟုတ်ပြန်ဘူး..ကားကြီးတွေကို ဆွဲပြီး ပန်းချီပြပွဲ တပွဲလောက်လုပ်လို့ရရင်ကောင်းမယ်..
ခင်ဗျားကို မကျေနပ်သေးတာက ပန်းချီဘယ်လိုဆွဲခဲ့တယ် ဆွဲတဲ့အခါမှာ ဘယ်လို နည်းပညာအရ က ဘယ်လို့ ဘယ်ညာ ပိုစ့် တခုလောက်ရေးပါဆို..မရေးသေးတာပါပဲ
ဒါကတော့ ကျနော် အတ္တနောမတိ ပါ.ဟဲ.ဟဲ.(သိချင်တာကို အချောင်ခိုတာလဲပါသပေါ့ဗျာ.)
စကားလုံးတွေကို ဖွင့်ချလို့မရလောက်အောင် ဆွံ့အသွားတဲ့အခါ...ကျနော် ပန်းချီဆွဲချင်တာ တကယ်ကလဲ ဘာမှကို မဆွဲတတ်တာ.ပေါ့ဗျာ.လုပ်ကြည့်ချင်တာမျိူးပါပဲ..ဘာရယ်တော့လဲမဟုတ်ပါဘူး.
သာမာန်ပန်းချီမဟုတ်ပဲ အတွေးလေးတွေပါနေတဲ့ ထူးခြားလေးနက်တဲ့ပန်းချီကားလေးတွေပါ… ပန်းချီမဆွဲခင် ဘယ်လိုပုံလေးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးဆန်းဆန်းလေးကို စိတ်ဝင်စားမိတယ်… အမကိုလဲ တပုံလောက်ဆွဲပေးပါလားပန်ရေ…
သိုးထိန်းနဲ့ ခင်လွန်းအတွက် ဆွဲပေးတဲ့ ပုံတွေကို အနှစ်သက်ဆုံးပါပဲ...
ပါရမီရှင်ရဲ့လက်ရာတွေပါ...။ ၇ ပုံ ကိုအရမ်းကြိုက်တယ်...။ ၃ ပုံကိုသဘောကျတယ်...။
ပုံတွေသဘောကျလွန်းလို့ သွားမန့်ဦးမယ်ဆိုပြီးလာခဲ့ပါတယ်။ ပြောချင်တာတွေ သူများအကုန်ဦးသွားပြီ :)
အမှောင်ထဲကကောင် ကို သဘောကျတယ် မပန်...အဲလို ဆွဲတတ်ချင်လိုက်တာ...အတွေးအခေါ်ကောင်း ရှိဖို့ လိုတယ်နော်....
မေ၏အပြုံး နဲ့ ကတိ ဆိုတဲ့သရုပ်ဖော်ပုံလေးတွေကို တော်တော်ကြိုက်တယ်။
ကြီးကေနဲ့ အန်တီတန်ခူးတို့လိုမျိုး သားလည်းအပ်ချင်ပါကြောင်း တောင်းဆိုချင်ပါကြောင်းး :))))))
1,4,6,7 ပုံလေးတွေကို ကြိုက်တယ် တော်တော်လေးသဘောကျတယ်။ အကုန်လုံးတော့ မကြိုက်ချေ။
မေရဲ့ အပြုံးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ...
ဟိုတလောလေးက တူညား အတွက် ဆွဲပေးထားတဲ့ ပုံလေးတွေလဲ ထည့်အုံးမှပေါ့...း))
လက်ရာတွေတကယ်ကောင်းတယ်။ ဒီဇိုင်းအပ်ရင်ကောင်းမလားလို့။ နားတော့မလည်ဘူး။
မေရဲ့ အပြုံးနဲ့ နွေဦးကို ကြိုက်တယ် ပန်ရေ..
မပန်ဒိုရာရေ အနုပညာလက်ရာမြောက်လှတဲ့ ပုံတွေအားလုံးကို လာကြည့်သွားပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးမတတ်ပေမဲ့ ဖန်တီးတတ်သူတွေကို အားပေးလျက်ပါ။
တိုင်ပတ်တယ်ဆိုတာ တပ်ပိုင်တယ်ကိုပြောတာလား။ ဘယ်တပ်လဲ မြန်မာတပ်ဆိုကြောက်သဗျို။ (ပုံတချို့ ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။)ပျော်စေ။
တိုင်ပတ် က နေတာလား
Good. Looks like professional.